The retail industry and best sales jobs | USAHello ကနေအလုပ်အရင်းမြစ်များ | USAHello
Learn about the sales industry and different kinds of sales and retail jobs. Read about the best sales jobs and different career paths you can take in sales. သင်လိုအပ်သောအရာကိုလေ့ကျင့်ရေးထွက်ရှာဘယ်မှာသင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေမှုကိုစတင်ရန်.
Sales include retail, which means selling things directly to people. Millions of people work in retail sales. There is alwaysahigh demand for retail salespeople, but the jobs are not always well paid. ဖတ် government information and statistics about sales occupations.
Tech sales representative – မိုက်ကရိုဆော့ဖ, IBM, Adobe and Salesforce are among many tech companies that offer high-paid sales jobs to skilled salespeople.
ငါအဘယ်မှာရှိ start ပါဘူး?
Many community colleges offer sales and marketing classes. သူတို့ကအထူးသဖြင့်အသစ်ရောက်ရှိလာသောနှင့်အင်္ဂလိပ်သင်ယူသူအဘို့အအတန်းရှိစေခြင်းငှါ. သငျသညျအနီးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ကိုရှာပါ.
သင် ... လုပ်ချင်ပါသလား နိုင်ငံသားဖြစ်လာ?
သင် ... လုပ်ချင်ပါသလား သင့်ရဲ့GED®ဒီပလိုမာဝင်ငွေ?
Use your local jobs center: ခပ်သိမ်းသောမြို့အတွက်အစိုးရအလုပ်အကိုင်စင်တာများအခမဲ့များမှာ. သူတို့ကအကြံဉာဏ်ကိုပူဇော်နှင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များများစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်. သူတို့ကကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့အလုပ် applications များနှင့်အတူကူညီ. သူတို့ကအလုပ်သင်တန်းနှင့်ပညာရေးရန်သင့်အားဆက်သွယ်နိုင်သည်. Find your nearest employment center.
အွန်လိုင်းရှာရန်: Salesjobs.com isajobs website specializing in all kinds of sales jobs.